Please explain 'SHA-256 HMAC secure hash' ! - MYSTERY ZILLION
Please explain 'SHA-256 HMAC secure hash' !
May 2017 in Web Development
Please explain about 'SHA-256 HMAC secure hash' ! Where is use?
SHA-256 ဆိုတာက Hasing algorithm တစ်ခုပါ။ Hash ဆိုတာကတော့ data ထည့်လိုက်ရင် မူရင်း data ပြန်မရပဲ hash value ပေးပါတယ်။ ဥပမာaကို ထည့်လိုက်ရင် ca978112ca1bbdcafac231b39a23dc4da786eff8147c4e72b9807785afee48bb ဆိုပြီး ထွက်လာမယ်။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပဲ ခေါ်ခေါ် ဒီ value ကိုပဲ ပြန်ပေးတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ hash ကို password တွေ အတွက် အသုံးပြုတယ်။ user password ကို data base ထဲမှာ plain မသိမ်းဘူး။ data ပေါက်သွားခဲ့ရင်သော်လည်း အခြား developer တစ်ယောက်ယောက်က database ကို ဖွင့်ပြီး password တွေ မြင်သွားရမှာ စိုးလို့ hash နဲ့ သိမ်းပါတယ်။ user အတွက်လည်း စိတ်ချရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ value တွေ pass လုပ်သည့် အခါမှာ သုံးတယ်။ ဥပမာ။
hash က ဘယ်ကနေ ရတာလဲ ဆိုတော့ mgmg45thstreet1234 ကို hash လုပ်လိုက်တာပါ။
တစ်ယောက်ယောက်က ကြားနေဝင်ပြီးတော့ mgmg အစား aungaung ပြောင်းလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။
ဆိုပြီး hash လုပ်မယ်။ ပို့လိုက်သည့် hash value နဲ့တိုက်မယ်။ မတူဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်က value ကို ပြောင်းလိုက်တာ သေချာသွားပြီ။
hashing လုပ်သည့် အခါမှာ salt ကိုပါ ထည့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဘယ်လို value နဲ့ hash လုပ်ထားသလဲဆိုတာကို မှန်းရ ခက်အောင်ပါ။
mgmg45thstreet1234 အစား အပိုစာတွေထည့်ပြီးတော့ (mgmg45thstreet1234)_hash လို့သုံးရင် server ဘက်ကလည်း
ဆိုပြီး ရသည့် value ကိုပြန်ပြီး အခြား အပို စာတွေ ထည့်ပြီး hash လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ SHA256 နဲ့hash လုပ်ရင်တောင် အခြား အပိုစာတွေမသိသည့် အတွက် ပြန်ပြီးတော့ hash value အသစ်လုပ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။
May 2017 Registered Users